Chirevo cheMapofu Librarian: Nhema nhema uye kushungurudzwa. | Zvazvino Zvinyorwa
Chinovhiringidza cheMapofu Librarian: Iyo tsotsi inoverengeka iyo inotsvaga mukushungurudzwa.
Ana Ballabriga naDavid Zaplana: Vanyori veParadox yeiyo Blind Librarian.
Chirevo cheMapofu Librarian: Mhirizhonga yakaipa uye manzwiro asingadzorwi anopfuudzwa kubva kuchizvarwa kuenda kuchizvarwa mukati memhuri uye nharaunda yayo.
Parizvino aive akarara nerunyararo, akafuratira. Kwaari zvese zvaive zvapfuura, kudzikama kwakakunda zvakare. Kwaari, zvakadaro, iyo kutenderera yakanga ichitanga zvakare; yaingova nyaya yenguva murume wake asati agadzirira kuendesa kurohwa kunotevera. "
Kupesana zvemumba izvo zvinoratidza iyo novel hazvina kukodzera kune vese vateereri, yakapindirana pakati pekutsanangurwa kwehupenyu hwezuva nezuva uye kuferefetwa kwenyaya yekuponda, kurwisa hana yedu nehutu hwedu semakonye ari pakufamba kwevanobata. Simba risina simba rinokunda muverengi mumafungu, kushora, kutsamwa, kurambwa. Kushushikana kwepfungwa kunovimbiswa.
La mavambo yenoveli inomira pakati pehunhu hwayo kubvira iyo protagonista uye yakajairwa tambo yechirongwa anoshusha. Kumakomberedza, mavara akatakurwa nehupfumi hwemabasa akanaka uye zviito zvehutsinye zvakafanana, vanoumba zano rakaomarara mariri mapiritsi emhirizhonga inotyisa uye isina moyo inofambisa muverengi kuenderera nemufananidzo wakaumbwa mumusoro kwenguva refu mushure mekuvhara bhuku.
"Aigara aine chirevo chisina kusimba chakagadzirirwa pamuromo werurimi rwake, sekunge paive nedendere rezvinyavada rakaunganidza huturu."
Uye ndezvekuti, muParadox yeBlind Librarian, Ana Ballabriga naDavid Zaplana, isu ivo vanoratidza izvo chaizvo izvo zvatisingawanzo kuda kutarisa kumeso.
Vanodheerera uye vane hukasha kuchikoro vanodheerera vana vanogara nemhirizhonga kumba.
"Aiziva kuti chigumbu chaive nemukoma wake chaive chisina kufanorongerwa, asi mhedzisiro yekufananidza kwaive neruvengo kwakashatisa hushamwari hwavo kuvaita vavengi. »
Vana vanozvidzwa kana kushungurudzwa muhucheche hwavo vanowanzo dzokorora maitiro sevakuru.
"Ruvengo rukuru rwakaburitswa mukati make, rwakatanga kutarira kuna amai vake, ndokuzopararira nekufananidza kune vamwe vakadzi."
Ivo vanobatwa zvisina kunaka vanotanga nekururamisa vanoshusha, vanopomera munhu wese nekuvakurudzira nekuti zvakaoma kwazvo kuona kumeso kwekutadza kwakakomba kwakavakomberedza.
“Beatriz akavenga Felix nesimba rake rose, uyo anga achifambisa mhuka. Iye ainyatsoziva chaizvo maawa mangani apedzwa naCamilo achinyora, kuti iwo mapeji akakosha kwaari kupfuura mhuri yake, uye murume uya akwegura aive nechiso chakashatirwa aive azvipira kurasa basa rake. "Uye kana Camilo aive nemamiriro akashata, wekutanga kubhadhara zvaizove iye, izvo zvaive pachena kwaari."
Kunyangwe mwana ane moyo wakanakisa anokwanisa kuita hutsinye hwakanyanya kana mhirizhonga iri paari yakapfuura yaakagadzirira kubata.
«Amai vake vaive vaenda mumasekonzi mashoma kubva pakudzvinyirira kusvika pakutsiurwa. "Haana kukwanisa kutsungirira kumuona achityisidzirwa kudaro, squat, shrunken, akaderedzwa kusvika chiuru chake."
Kubatwa chibharo kunoratidzira munhu kweupenyu hwavo hwese. Unogona kuenderera, kukunda, kutonga, asi pane zviitiko zvausingakwanise kukunda.
"Haana kumbonzwa akasviba kudaro, kunyangwe Ali paakamuremadza. Kuzvidza mai vake chaiko kwaitove kwakanyanya. "
Mhirizhonga ine simba rekutenderera, vakasimba vanobata zvisina kusimba uye vasina kusimba.
"Kazhinji akagona kuchengetedza ruvengo irworwo, asi nguva nenguva aigona kumhanya, achimutsa mukati make mhuka yakatora kutonga kwemuviri nepfungwa nechinangwa chega chekupedza nyota yekutsiva."
Chirevo cheMapofu Librarian: Mhirizhonga inopfuudzwa kubva kumubereki kuenda kumwana senge magene.
Zvisinei, nhoroondo rwiyo rwetariro: pane nyaya dzinopera zvakanaka, uye panguva imwechete dzinoitika nekuti hadzisi dzese dzinoita uye idzi hadzisi idzo dzakaomesesa. Dzimwe nguva mhirizhonga inopera murufu, vamwe mukusunungurwa, vamwe mumhirizhonga yakawanda uye vamwe mukufungidzira kwehupenyu hwakasiyana.
Zviitiko zveuipi hwezuva nezuva, shanduko yemunhu pachezvayo, asi hapana zvishoma zvinovimbika vhara ino noti iyo Ini ndaigona kuenderera kune husingaperi, nekuti iyi inyaya yezve kuvandudzwa kwemunhu wevamiririri pachiyero chakatemwa nemamiriro avo uye vanhu havambomira kuchinja kana hupenyu hahuvaise mumamiriro akaoma.
«Hauna kumbonzwa here kuti zvakapfuura ndiyo hwaro hwazvino? Kana iwe ukazvipira iwe kuti ubvise icho, hupenyu hwako hunogona kushomeka, kana kutonyanya, hunogona kudonha. »
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Nhema nhema » Chinovhiringidza cheMapofu Librarian: Iyo tsotsi inoverengeka iyo inotsvaga mukushungurudzwa.
Vanyori vakazvimiririra I. Francisco Hergueta. 10 mibvunzo kumusiki waErnesto Sacromonte